by မိုက်ကယ် Schmitz
သငျသညျငှါလာကြသောအခါ ဂျာမဏီ နှင့်လမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်အချို့ကိုသင်ဘန်းစကားသို့မဟုတ်ကျိန်စာစကားနားမထောငျနိုငျတယျ။ သူတို့ကအလွန်ကိုမကြာခဏတစ်စုံတစ်ဦး၏အမူအကျင့်များအချို့သောကဏ္ဍများ၏ပျော်စရာစေရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဒီနေရာတွင်တစ်ခုစေ့စေ့နားထောင်နားထောင်ကြသောအခါသင်တို့ကိုနားမထောင်စေခြင်းငှါပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသူတို့၏တချို့ရှိနေပါတယ်။
ဤသည်ပူရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းယူ likes သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီမှာ, ရေခဲ-ရေအေးနှင့်အတူ showering ပုလ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းတစ်ခုမကြာခဏဆွေးနွေးတင်ပြဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, တစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့လျှပ်စစ်မီးမရှိဘဲအသက်တာ၏တောက်ပဘက်မြင်လိုကဝတ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့ဖွင့်သက်သာကကြိုက်နှစ်သက်သို့မဟုတ်တစ်နည်းနည်းသူရဲဘောကြောင်လိမ့်မယ်သူကလူတွေကို Warmduscher ပြက်လုံးတွေနဲ့ပြောကြပါတယ်။
အိမ်သာအစားရပ်တည်မှုပေါ်မှာထိုင် peeing သူတစ်ဦးကလူကို။ "ရီးရဲလ်ယောက်ျား" သူတို့ကသူတို့နယ်မြေကို mark တဲ့အခါမှာရပ် - နှင့်မျှော်လင့်နောက်မှအဲဒါကိုရှင်းလင်း။
က striver သို့မဟုတ်မလိုလားဖော်ပြထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "မလိုလား" "Streber" ထက်အေးဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့သည်ကျနော်တို့ Streber အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါဂျာမန်လညျး "မလိုလား" သုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုအလွန်စိတ်အားထက်သန်သည်သို့မဟုတ်တူသောပြုမူလျှင် Hermione Granger -you တစ် Streber သူ့ကိုမခေါ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ "Angeber" ဟု poser တစ်ပြပွဲ-off ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအများကြီးတန်ခိုးကြီးခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးအသွားအလာအလင်းနှင့်ပိုင်ရှင်လမ်းပေါ်မှာရှိလူအထင်ကြီးဖို့နင်းနှင့်အတူကစားနေသည်မှာစျေးကြီးတဲ့ကားမြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်အခါသင်သေချာဘို့ကနားထောင်မည်။
အဆိုပါ Teletubbies သတိမရကြသလော
ကောင်းပြီ, ဒီစကားလုံးပြန် Teletubbies မှချီလွှဲမညျ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖော်ပြထားတယ် - နှင့်ဤသည် - တကယ်ပဲ wimpy အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား - သငျနှစျနှစျများမှာမဟုတ်လျှင်။ သူတို့တစ်တွေလောင်းပျောက်ဆုံးသွားမဟုတ်လျှင် cool အရွယ်ရောက်-ups ဒီမလုပ်ကြပါဘူး။ သင်ဤအသုံးပြုချင်လျှင်ဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်က apply နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမသင်မကြားမယ်လို့ဒါမှသင်တစ်ဦးTeletubbyzurückwinklerအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလူတစ်ဦးအဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်ပါဘူး။
ဂျာမနီမှာတော့ဘီယာသောက်ခြင်း၏နိုင်ငံ, အခြားသူများတစ်ဦးဘီယာများအနေဖြင့်လက်ဖက်ရည်မသောက် uncool ဖြစ်ပါသည် - ငါဗြိတိန်နှင့်အခြားအဘို့အစိတ်မကောင်းပါဘူး လက်ဖက်ရည် ကဒီမှာပရိတ်သတ်တွေ။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအရက်မူးရထားတဲ့အရက်ဖြစ်လာဖို့ထင်ကြသည်မဟုတ်, မသင်တစ်ဦးဘီယာရှိသည်ဖို့အတင်းအကျပ်ခံစားရသင့်တယ် - ဒါဟာတူသောလက်ဖက်ရည်ကြည့်သောက်သုံးစေသည်အမှန်တကယ် "Feierabend Bier" (နောက်ပိုင်း-အလုပ်ဘီယာ) ရှိခြင်း့ဒီခံစားချက်ဖြစ်ပါသည် "စစ်မှန်သော" ဂျာမန်များအတွက်လိုက်တယ်စိတ်ကူး။
သူသည်အပူမခံမရပ်နိုင်သောကြောင့်အဘယ်သူသည်ဥယျာဉ်အရိပ်ထဲမှာသူ့ကားတစ်စုံတစ်ဦးကဖော်ပြပေးသောစကားလုံး။ တစ်ဦးကအမှန်တကယ်လူကိုမဆိုအပူရပ်တည်ရန်ထင်နေသည်။ ကောင်းပြီ, သင်ယုံလျှင် - ထိုမွို့၌ဂျာမန်နွေရာသီအတွက်ပျော်စရာရှိသည် ...
စာသားတစ်ခုပျော့ကြက်ဥ။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး wimp တစ်သူရဲဘောနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုစိတျကူးအခြေအနေမှာဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာစကားလုံးဂြာမနျဟုအမည်ပေးထားသည့်ရုပ်ရှင် "Vanilla က Sky" မှလာပါတယ်။ ဒါဟာနည်းနည်းအားဖြင့်တစ်ချိန်ကပေမယ့်နည်းနည်းမှာအရာအားလုံးမဟုတ်ပျော်မွေ့လိုသူဖော်ပြသည်။ "Verzögerung" - နှောင့်နှေးဆိုလိုသည်။
ဤသည်အများဆုံးဖွယ်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးစော်ကားမှုတစ်ခုအဖြစ်မသုံးမယ်ဆိုတာစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကောင်းယောက်ျားသည်အားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ခံရဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ သို့သော် - ယောက်ျား non-သီလနှင့်ပုလ်၏မရှိခြင်းသို့ဤအရည်အသွေးသည်လှည့်ပြီ။ တချို့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ကနေပိုကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးလူရွှင်တော်တစ်ဦးက "နားလည်မှုကိုအမြိုးသမီးမြား" ၏ဒီနည်းနည်း counterexample ခံစားပါ။
အထက်ရှိသူများကဲ့ရဲ့သင်တို့အဘို့အလုံလောက်အောင်သူရဲမဟုတ်လျှင်, ခြုံပတ်ပတ်လည်ကိုရိုက်မည်မဟုတ်ရာ, ဒီ Beleidigungsgenerator စမ်းပါ။
ကျနော်တို့ကသင်ဆဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် macho ဖြစ်သည့်အချို့သောဂျာမန်၏အတွေးအခေါ်တွေသို့အနည်းငယ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု, ပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပွငျသစျထဲတွင် (အသုံးပြုခြင်းမှ) "Utiliser" Conjugate လုပ်နည်း
စကားထူးများနှင့်ဖော်ပြချက် - လုပ်ငန်းခွင်
ဘယ်လိုဟိရဂဏရေးဖို့: ra, ri, ru, ပြန်လည်, ro - ら, り, る, れ, ろ
La Vache! - ပြင်သစ်ဖော်ပြမှုရှင်းလင်းချက်
Plus အားနှင့်အတူပြင်သစ်ဖော်ပြချက် Learn
'' ယူပါရန် '' Translate ဒါကစပိန်ကြိယာ
ဘာသာပြန်ချက်နှင့်ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "Atari" ၏ဇာတ်ကောင်
ဂျာမန်ကြိယာ '' Ausmachen '' ၏အဓိပ္ပာယ်
ပွဲစဉ် Play ကိုအမှတ်ပေး
အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစတန့် - အလတ်စား Varsity ကစားသမားမှအသေးစား
အဆိုပါစူးအက်တူးမြောင်းအကျပ်အတည်း - အာဖရိက၏ကိုလိုနီစနစ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် Key ကို Event
Zebulon ပိုက်ရဲ့ Mystery အနောက်တိုင်းလေ့လာရေးခရီး
အဓိပ္ပာယ်နှင့် Infinite ကြိယာ၏ဥပမာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များများအတွက်အင်္ဂလိပ် - တစ်ဦးဆရာဝန်မယ့်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းပြုလုပ်ခြင်း
Thich ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို Hanh နှင့်စိတ်ကိုသင်တန်းများ
အကယ်စင်စစ်ခရစ်စမတ်ဝိညာဉ်တော်သည် Capture ဒါက LDS ရပ်ကွက်ခရစ္စမတ်လှုပ်ရှားမှုများ
ဘေ့စဘောထိပ်တန်း Center က Fielder (MLB) သမိုင်း
Nihilism ကဘာလဲ? Nihilism, Nihilist ဒဿနိကဗေဒ၏သမိုင်း, Philosophers
အဆိုပါ Cooper ကပြည်ထောင်စုအဆင့်လက်ခံရေး
ဧရာမနို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် Megafauna ရုပ်ပုံများနှင့် Profiles
သင်မည်သို့ဟိန္ဒူဘာသာ Define သလား?
ဂျော်နီ Appleseed ပရင့်ထုတ်ရန်
အဆိုပါ TKTS Booth ၏အတွင်းလျှို့ဝှက်ချက်များ
အဆိုပါမြွေဂေါက်သီးဂိမ်းနှင့်အာမခံ Play လုပ်နည်း
Residentes Permanente: cómo tramitar la အစိမ်းရောင်ကဒ်မသန်စွမ်း los esposos
အဆိုပါဦးနှောက်၏ Ventricular စနစ်
© 2021 my.eferrit.com